Distimo: App Analytics, Fanovana ary fanarahana App Store | Martech Zone
Sabotsy, Desambra 14, 2013 Douglas Karr
Manavaka aho manome fampiharana finday maimaim-poana Analytics sehatra ho an'ny mpamorona ary koa angona momba ny tsenan'ny fampiharana. Ny sehatra Distimo dia ahafahan'ny mpamorona manara-maso ny fisintomana ny rindranasa finday, ny fidiram-bolan'ny app ary ny fivadihan'ny rindranasa ho an'ny fampielezan-kevitra amin'ny fampiharana azy ireo manerana ny fivarotana fampiharana maro. Distimo manolotra ny fampiharana findainy Analytics maimaim-poana, mamela azy ireo hanangona angon-drakitra tsy mampino ary hanatsara ny maha-marina ny valiny karama, AppIQ.
Distimo's AppIQ manome angon-drakitra mifaninana isan'andro ho an'ny fampiharana amin'ny tsena finday maro. Manampy ny orinasa handray fanapahan-kevitra tsara sy paikady izany, hahafahan'izy ireo mifaninana amin'ny tsenan'ny fampiharana manerantany.
Ny tombana amin'ny fampidinana dia ahafahanao mamakafaka ny anjaranao ary mampitahanao ny fampidiranao amin'ireo mpifaninana aminao amin'ny tabilao tokana. Ny hetsika toy ny fanovana ny vidiny, ny lisitra asongadiny ary ny fanavaozana dia ahafahanao manadihady ny fiantraikan'ny hetsika tsirairay amin'ny fisintomana. Ny tombana amin'ny fidiram-bola dia ahafahanao manadihady ny vola miditra amin'ny mpifaninana rehetra ary manara-maso ny vola miditra avy amin'ny firenena, ny vokatra ary ny maodelin'ny orinasa.
Distimo koa dia manana an'io fampiharana finday manokana izay ahafahanao manara-maso ny fampidinana, ny vola azo, ny naoty ary ny fijerena miaraka amin'ny fiasa fanampiny toy ny fanarahan-dia hetsika ho an'ny fivarotana fampiharana lehibe folo. Raha manana kaonty AppIQ ianao, ny data-nao AppIQ rehetra dia azo alaina ao amin'ny fampiharana ihany koa, ahafahanao mampitaha ny angona fampidinana sy fidiram-bolanao amin'ireo fifaninanana.
Raha mihazakazaka amin'ny Adobe Analytics ianao, dia azonao atao ny mampiditra mivantana ny angona Distimo - tsy andoavany vola - amin'ny alàlan'izy ireo Adobe Genesis API fampidirana.
Tags: adobe analyticsadobe omniturefivadihana fivarotana appappiqdistimofinday fampiharanaanalytics amin'ny findayangona fifaninanana fampiharana findayfivadihana app mobilefanadihadiana omniture
Lesona.ly: Ny fampiharana sy fampianarana